Ongororo yemwedzi: Ini ndinoshandisa madhiraivha eimba ye ... | Kubva kuLinux
Ongororo yemwedzi: Ini ndinoshandisa madhiraivha eimba ye ...
La chisarudzo Del mwedzi wapfuura chinangwa chekutsvaga nei tichiramba tichishandisa software yekudyara kunyangwe isu tisina chido cheku.
Nenzira, nekuda kwe 1136 vanhu uyo akatora chikamu!
1 Iwe unoshandisa proprietary software paGNU / Linux?
2 Ongororo yemwedzi: Ini ndinoshandisa madhiraivha eimba ye ...
Iwe unoshandisa proprietary software paGNU / Linux?
Heino mhedzisiro yeongororo yemwedzi wapfuura:
Ehe, vatyairi chete: 468 (41%)
Ehe, madhiraivha uye zvinoshandiswa
Kwete: 159 (13%)
Ehe, maapplication chete: 89 (7%)
Inenge hafu yevavhoti yakabvuma kuti vanoshandisa chete madhiraivha eimba. Kana isu tikawedzera kune iyo 41% iyo 36% yevavhoti vanoshandisa vatyairi vemidziyo nemaapplication, inotipa huwandu hwese hwe77% yevashandisi vanoshandisa madhiraivha eimba.
Sezvineiwo, apa ndipo panosara mukaha mukuru: dambudziko hombe nderekutyaira. Zvisinei, ngatiregei kuzvinyengera, vashandisi vakabvuma kushandisa zvikumbiro zvevabatsiri zvinowedzera kusvika pa43%, chiyero chisinga regedzwe uye icho chinofanirwa kutariswa.
Izvi zvinotisvitsa kumubvunzo unotevera ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Ongororo yemwedzi: Ini ndinoshandisa madhiraivha eimba ye ...
Nehurombo isu tichava nedambudziko iro kudzamara paine vagadziri vanoita zvemhando yepamusoro yemahara kuitira kuti vagadziri vemahara vagadzire madhiraivha nemamojuru kuitira kuti kernel iitsigire.
Diego Silverberg akadaro
Kuve neongororo yakazara.
Yekutanga Iri GNU OS kana GNU / Linux
Yechipiri YEMAHARA hazvireve YEMAHARA, tora duramazwi
3º "kumira" kweGnu / linux kuri nekuda kwekuti ingangoita fungidziro nekutengesa njodzi kumakomputa mahombe.
4º Iwe uri dhongi
Kunyanya nekadhi risina waya: / Ini handina chokwadi kana Intel mutyairi ariwo muridzi D: asi kana zvirizvo, saka ndinoishandisawo kune iyo xD girafu.}
Neraki zviri kuita kuti zvive nyore uye nyore kuisa mutyairi wekuparadzira mu linux, iyo b43 yakaipa kwazvo uye unofanirwa kushandisa yakasarudzika sarudzo
Marcelo tamasi akadaro
Hazvindishamise kuti ruzhinji runoshandisa madhiraivha eimba, asi imhaka yekuti ivo vashandisi vekugovera ne kernel 2.6.xxx. Ini ndakagamuchira Linux Mint Debian Edition, iyo kunyangwe iyo yakavakirwa pane isina-kugadzikana kusimudzira, inomhanya zvinoshamisa uye inouya ne 3.2 kernel. Ndinoishandisa munzvimbo yebasa, iine matambudziko mashoma pane Ubuntu uye Mint 11. Hapasisina matambudziko nemavhidhiyo, zvese zvinoonekwa muzere skrini, uye zvishandiso zvinozivikanwa otomatiki, kunyangwe chinoshamisa.
Semuenzaniso: Ndine PC yedesktop ine TP Link wifi adapter (iyo inoita senge peni yekutyaira). Kunyangwe neWinXP ini ndaigona kuita kuti ishande, kunyangwe nekuda kweizvozvo inounza madhiraivha ... apo iine LMDE iyo inosimudza pachezvayo yakazviziva uye ikadhonza zvidzoreso zvinodikanwa. Chishamiso.
Pindura Marcelo Tamasi
josue k-po akadaro
iko kutuka kwenhandare bcm4312 ¬¬
Pindura Josue k-po
Ini ndinofanirwa kushandisa zvinotyisa zvinotyaira ATI madhiraivha kushandisa pasi pehunhu-ganda mamiriro.
Yechii? Kana ongororo yakanangana neavo vanozviita. Pablo anoda kutsvaga kuti chii chavanoshandiswa. Iwe unotova neanofungidzirwa muzana yevaverengi vasingashandise mune chero zvazvingaitika.
Ini ndinoshandisa zvivakwa zveNvidia yangu, zvirinani kusvikira nouveau yakura zvakanyanya pachinhu chetsigiro ye3D (ndinofarira kutamba uyezve, ndinofanira kushandisa kugona kwakawanda kwemifananidzo yangu)
Ini handishandisi madhiraivha epamutemo zvachose, handina sarudzo iyoyo, unogona kuiwedzera?
Saito Mordraw akadaro
Neraki hapana mumwe wemuchina wangu unoda ini kuti ndiise madhiraivha epfuma, zvisinei kana uchishandisa openuse uye ubuntu handina mubvunzo kuti mune zvimwe zvikamu ivo vanotozvibatanidza; D
Ini ndinoshandisa yemahara dhiraivha neAti yangu, asi nekuti ini handina imwe. Dai ndaigona, ndaizoisa zvakavanzika kuvandudza mashandiro. Kunyange zvakadaro, ndinobvuma kuti nekufamba kwenguva munhu akasununguka anondipa mashoma matambudziko pane eakavanzika.
Nezve nvidia 9800 gt bhodhi, nekuti ini handisi kuwana kuita kwakaringana, kana rutsigiro, rwemabasa ayo ese pamwe nedzimwe nzira dzemahara (zvakadaro).
Ini handikwanise kuwana "kumhanyisa", ini ndinoshandisa Kubatana 3D nemitambo iyo (ab) inoshandisa OpenGL, uye ndine mamonitor maviri akabatana.
Ndinovimba zuva randichangoshandisa chete mutyairi wepachena, nekuti maNVIDIA andivigira akawanda marwadzo emusoro (bugs), asi parizvino hwakaipa hushoma.
Ndakagara ndichiona kusapusa kuri kungosarudza yemahara uye isingabhadharwe software, ndipo panorara Linux stalemate. Kwete zvese zvinogona kusununguka, uye haazi munhu wese genie.
Pindura kuna alexx
Kune akawanda. Linux Mint inogona kunge iri sarudzo iri pachena.
Manjaro ndeimwe distro iyo ichangotanga asi inosangana nehunhu uye zvipikirwa.
Chii chingave chiri kugovera icho chinouya kare shit nemadhiraivha epachivande kana iwe uchida iyo wi-fi uye makadhi emifananidzo
Zvinosuruvarisa kuti pane zvimwe zvishandiso izvo zvisiri izvo zviripo chero mhando yevatyairi yekushanda muLinux. Nehurombo ndine zvimwe zvacho, zvandisina kutenga, zvirinani zvakananga:
A canon ip 1300 purinda - Ndeapi mushure memakore ekuti ive-inoshanda mu linux, ini ndakakwanisa kuitisa kuti ishande nevatyairi vezvivakwa kubva kune imwe canon, iyo yaishamisa kushanda pane ino purinda.
Iyo i. LOOK 111 kamera, iyo kunyangwe ichitsigirwa nekernel, inofanirwa kuve chiumbwe, munzira yandisati ndambobudirira.
Pakupedzisira ndiro yewifi, kubva kune netbook. 3DSP nhasi SYNTEK. Aya ma bastard akangoburitsa dzimwe shanduro dzemutyairi, idzo dzisina kumboshanda zvakanyanya, kune dzimwe tsanga dzekare. Kambani payakachinja kuita syntek, ivo vakamira zvakananga kutsigira chigadzirwa.
Nguva zhinji vashandisi havanetseke zvakanyanya pamusoro pekuti mutyairi ane kodzero here kana kwete, kana zvisiri izvo kuti pane imwe chete inoshanda nenzira yakanaka.
Asi zviri pachena kuti nhasi neruzivo rwakati wandei pazvinhu izvi, handaimbotenga komputa ine kana Hardware ine madhiri eimba.
How To Fedora: Wedzera Rutsigiro rweKuburitsa Mafaira